သိမ်ငယ်မိတဲ့အခါ – Live the Dream
ကျနော်တို့လူသားတွေက နေ့စဉ်ဘဝတွေကို ခံစားချက်မျိုးစုံနဲ့ ဖြတ်သန်းနေကြပါတယ်။ မနေ့သင်ကပျော်ရွှင်နေနိုင်သလို ဒီနေ့မှာတော့ သင်ဟာဝမ်းနည်းနေနိုင်ပါတယ်။ တချို့ပျော်ရွှင်စရာကိစ္စတွေက ကျနော်တို့မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာ ထာဝရစွဲကျန်နေနိုင်သလို တချို့စိတ်ညစ်စရာကိစ္စတွေကလည်း ကျနော်တို့နေ့စဉ်ဘဝကို အတော်ဒုက္ခပေးပါတယ်ဗျ။ သှုံးစရာမရှိလို့၊ အလုပ်တေမအောင်မြင်လို့၊ ဝနေလို့၊ မိသားစုနဲ့အဆင်မပြေလို့၊ ရည်းစားနဲ့ပြတ်လို့စသဖြင့်ပေါ့ဗျာ။ အဲ့တော့ဘယ်လိုအချိန်မှာ သိမ်ငယ်မိလဲ… သင်စိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့အချိန် အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေ အဆင်ပြေနေတဲ့သင့်သူငယ်ချင်းတွေ သွားတွေ့မိတာမှစလို့ပေါ့။ စာဖတ်သူတို့တော့ဖြစ်မိလားမသိဘူးဗျ။ ကျနော်စိတ်ဆင်းရဲနေချိန်ဆို တစ်ကမ္ဘာလုံးကသူတွေ အဆင်ပြေနေသလို ခံစားချက်ဗျ။မနာလိုတာမဟုတ်ပဲ ဘာလို့ငါမှအဲ့လိုဖြစ်ရတာလဲ ဆိုပြီးကိုယ့်ကိုကိုမေးခွန်းထုတ်ပြီးကျိတ်ခံစားခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေ ပေါ့။ အဲ့မှာစပြီးကျနော်တို့လူတွေနဲ့စကားမပြောခြင်တော့၊ လူတောထဲမသွားခြင်တော့ပဲ စပြီးသိမ်ငယ်စိတ်တွေဝင်လာရတော့တာပါပဲ။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုစိတ်ညစ်စရာတွေ၊ သိမ်ငယ်စိတ်တွေက အတေလေးရုန်းထွက်ခဲ့ရပါတယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
အိမ်ထဲမှာတစ်ယော်တည်းကျိတ်ခံစားခြင်းက သင့်ကိုပိုစိတ်ဖိဆီးစေပြီး စိတ်ကျရောဂါပါ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အိမ်ပြင်ကိုထွက်ပြီး တောက်ပတဲ့နေရောင်ကို ခံစားလိုက်ပါ။ လတ်ဆတ်တဲ့လေကို တဝရှုရှိုက်လိုက်ပါ။ သင်စိတ်ကိုငြိမ်းချမ်းသွားစေပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့ဟာအမှန်တရားကို လက်ခံရပါမယ်။ သင့်ကိုဘာလို့ရည်းစားက ထားခဲ့တာလည်း..သင့်မှာသူမကြိုက်တဲ့အချက်ရှိနေသေးလို့ပါ။ သင့်လုပ်ငန်းတွေဘာလို့မအောင်မြင်သေးတာလဲ။ သင်မသိသေးတဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေလို့ပါ။ အရှိကိုအရှိအတိုင်းလက်ခံလိုက်ခြင်းက သင့်ကိုထက်ဝက်ခန့် စိတ်သက်သာရာရစေပါတယ်။ အမှန်တရားကိုလက်ခံပြီး အဖြေကိုရှာလိုက်ပါ။
သင်သီချင်းဆိုတာကိုအကဲဖြတ်ဖို့ မြန်မာပြည်သိန်းတန်လည်းရှိမနေပါဘူး။ motivate ဖြစ်စေတဲ့သီချင်းတွေနားထောင်ပါ။သီချင်းတွေအော်ဆိုလိုက်ပါ။ ပေါက်ကွဲပစ်လိုက်ပါ။ ဂီတမှာကျနော်တို့မမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေ ရှိနေပါတယ်။ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆိုအပြီးမှာ ဘယ်ကမှန်းမသိတဲ့အားအင်တွေရလိုက်တာကို သင်ခံစားမိပါလိမ့်မယ်။
ပရဟိတလုပ်ခြင်းက စိတ်ကိုသိမ်မွေ့လာစေပါတယ်။ အလှူတန်းတွေလုပ်ပါ။မိဘမဲ့ဂေဟာမှာ Volunteer ဝင်လုပ်ကြည့်ပါ။ အချို့ဘဝတွေက သင်အခုရထားတဲ့ဘဝထက်များစွာပိုဆိုးပါတယ်။ သင်ရထားတဲ့ဘဝအပေါ် ကျေနပ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာ မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်နိုင်လာပါလိမ့်မယ်။
စကားဆိုတာပြောပါများရင်အမှားပါတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့မှားစေမဲ့စကားမျိုးကိုပြောမိမှဖြစ်ပါတယ်။လူအများနဲ့စကားပြောကြည့်ပါ။ မိတ်ဖွဲ့ပါ။ သူတို့မှာလည်းသင့်လို သူမသာကိုယ်မသာ အခက်ခဲကိုယ်စီနဲ့ဆိုတာသင်နားလည်လာပါလိမ့်မယ်။ စာရေးသူကိုယ်တိုင်လည်း တက္ကသိုလ်ရောက်ပြီးသူငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားပြောကြည့်မှ အဖေနဲ့မတည့်တာ ကျနော်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိခဲ့ရတာပါ။
(၆) Self-motivate လုပ်ပါ
သိမ်ငယ်စိတ်နဲ့အားငယ်စိတ်အတူတူပါပဲ။ သိမ်ငယ်တယ်ဆိုတာနဲ့ကိုယ်ကိုကို ယုံကြည်မှုတွေပျောက်ဆုံးလာတော့တာပါပဲ။ တကယ်တော့သိမ်ငယ်တယ်ဆိုတာ သင့်စိတ်ကလက်ခံလို့ပါ။ သင်မလက်မခံသေးသမျှ သင့်ကိုဘယ်သူမှသိမ်ငယ်အောင်လုပ်လို့မရပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုကိုအားပေးပါ။ ငါလုပ်နိုင်တယ်။ ငါဖြစ်ရမယ်။ ဘယ်လူသားကမှ သင့်ထက်ပိုမတော်နိုင်ဘူးလို့သာခံယူထားလိုက်ပါ။
တရားထိုင်ခြင်းက စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်ရာမှာ အထိရောက်ဆုံးပါပဲ။ တည်ငြိမ်ပြီးငြိမ်းခြမ်းနေတဲ့စိတ်ကသာ မှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်နိုင်မှာပါ။ အချို့အခက်အခဲတွေမှာ ဘာသာရေးရဲ့ အကူအညီယူပြီး ကျော်လွှားနိုင်ပါတယ်။
အခုဆိုကျနော်ဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့ အချက်တွေဖတ်ပြီး ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာ လမ်းစလေးဖြစ်ဖြစ်မြင်မိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ဘာနဲ့ပြီးမြောက်အောင်လုပ်ကြသလဲ။ အြ့ပင်ပန်းကကြည့်ရင်တော့ ဒီခြေတွေလက်တွေ ခန္ဒာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေနဲ့ပြီးမြောက်ကြတယ်ပေါ့ဗျာ။ ကျနော့အမြင်မှာတော့ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်သာမှန်ပါတယ်ဗျ။ ကျန်တဲ့ ၇ဝ ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့ စိတ်ရဲ့ခိုင်းစေမှုနဲ့ ကျနော်တို့လုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။ ကဲစိတ်စွမ်းအားဘယ်လောက်ကြီးလဲနော်။ဥပမာအားဖြင့် မကြာသေးခင်ကမှကွယ်လွန်သွားတဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်ကြီး Stephen Hawking လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကစံပြပါပဲ။
အဲ့တော့ကျနော်တို့ရဲ့စိတ်ကို ညှိုးငယ်ရင်း၊ သိမ်ငယ်ရင်းနဲ့ကုန်ဆုံးမယ်ဆိုမတန်ဘူးဗျ။ ဘာလို့ဆိုကျနော်တို့နေထိုင်တဲ့ဘဝကြီးက တိုတိုလေးမို့လို့ပါ။ လူ့ဘဝက ကောင်းတစ်လှည့်ဆိုးတစ်လှည့်မလို့ အဆိုးတွေပြီးသွားရင်တော့ အကောင်းတွေလာတဲ့အချိန်လည်းရှိလာအုန်းမှာပါ။ အဆိုးတွေကိုအကောင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲရင်း နေ့စဉ်ဘဝကိုအကောင်းဆုံး ဖြတ်သန်းကြရအောင်လားဗျာ။
Hi there friends, how is everything, and what you wish for to say on the topic of this article, in my view its genuinely
be tweeting this to my followers! Great blog and outstanding design. natalielise plenty of
famous, due to its feature contents. natalielise pof
It’s in fact very complicated in this full of activity life to listen news on TV, so I just use the web for that reason, and obtain the most recent information. pof
matter or did you modify it your self? Either way keep up the excellent quality writing, it’s rare to peeranice weblog like this one
this webpage carries awesome and actually excellent stuff in support of
Hurrah! At last I gotawebpage from where I can truly take valuable data regarding
speaking intelligently about. Now i’m very happy I found this during my hunt for something relating to
Simply wish to say your article is as surprising. The clearness in your put up is simply nice
quality articles or weblog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this
site. Studying this information So i am glad to show that I have an incredibly excellent uncanny feeling I discovered just what I needed.
I suchalot unquestionably will make certain to don?t put out of your mind this web site and provides italook onarelentless basis.
viagra dosage recommendations viagra withoutaperscription viagra online cheaper viagra pill viagra from watermelon
nizagara vs viagra viagra for women cheap viagra blue chew viagra scam viagra online pharmacy
how to make money online how to make more money make money how to make extra money make money at home
make money online from home make money from home make money online how to make money blogging make money online
suppose you addedalittle content? I am not suggesting your information isn’t solid., but suppose you addedaheadline to possibly get
folk’s attention? I mean သိမ်ငယ်မိတဲ့အခါ –
Live the Dream isalittle plain. You might peek at Yahoo’s front page and see how they create article titles
I simply want to mention I’m beginner to blogs and honestly liked this blog. Likely I’m going to bookmark your website . You surely have wonderful well written articles. Thanksabunch for revealing your blog site.
andabig section of folks will pass over your great writing
It is pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made just right content material as you did, the net can bealot more helpful than ever before.
out for such info. adreamoftrains best website hosting
Asking questions are truly pleasant thing if you are not understanding something totally, but this article gives nice understanding even.
Undeniably believe that that you said. Your favourite justification seemed to be at the net the simplest factor to understand of.
Hi it’s me, I am also visiting this website regularly, this web page is genuinely pleasant and the people are truly sharing nice thoughts.
activity! cheap flights yynxznuh
Hi! I just want to give youahuge thumbs up for the great info you’ve got right